Oputara Low mkpọtụ ụdị - China Ningbo Hicon Industry
Kpọọ Anyị: 0086 574 62132957
N'elu ụlọ packaged AC
Air mma Split duct pịnye AC
Air mma mmiri Chiller
Pịgharịa Water Chiller
Ịghasa Water Chiller
Idei mmiri ịghasa Water Chiller
Water Source Okpomọkụ mgbapụta
Mmiri na Air okpomọkụ mgbapụta
Mmiri na mmiri okpomọkụ mgbapụta
Hot Air Source Total Okpomọkụ Recovery mmiri ọkụ Unit
Ime ụlọ na-egwu mmiri AC unit
Air mma Ft Dịwara AC
Water mma Unit
Water mma packaged AC
Base ebe oyi unit
Kreenu tagzi oyi Unit
Gbasaa Ft Dịwara Unit
Gbasaa Wall n'ịnyịnya unit
Kewaa N'uko n'ịnyịnya unit
Elu arụmọrụ kreenu A / C unit
Low-temp mmiri mmiri chiller
High- temp mmiri chiller
Ngwugwu AC Unit
Air mma Self ẹdude AC
Water mma Self ẹdude AC
Air mma packaged AC
Ndokwa Condensing Unit
Unit Air oyi
Fan eriri igwe unt
Kwụ Zochie Unit
Kwụ Matala Unit
Vetikal zoro ezo Unit
Vetikal Matala Unit
Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na Unit
N'uko Zochie Unit
N'uko Matala Unit
AC Okpomọkụ Exchanger
mmiri eriri igwe
Oputara Low mkpọtụ ụdị
Marine N'uko zoro ezo Fan eriri igwe Unit Hisurp ka e dị iche iche usoro nke Fan eriri igwe Unit iji hụ a elu-ọkwa ikuku n'okpuru mmiri gburugburu ebe obibi. Si nnukwu na obere ahịa ụgbọ mmiri, dị iche iche ụdị dị maka ngwa, na-eju afọ a dịgasị iche iche nke chọrọ jụrụ akọ na ike isi mmalite na n'ụwa nile. Nke a na ebe nke ọkachamara nka enye Hisurp na-eduga onu a na ubi nke azụmahịa. Nke a kwụ zoro ezo ofufe eriri igwe usoro e mepụtara iji akanamde ...
Marine N'uko zoro ezo Fan eriri igwe Unit
Hisurp ka e dị iche iche usoro nke Fan eriri igwe Unit iji hụ a elu-ọkwa ikuku n'okpuru mmiri gburugburu ebe obibi. Si nnukwu na obere ahịa ụgbọ mmiri, dị iche iche ụdị dị maka ngwa, na-eju afọ a dịgasị iche iche nke chọrọ jụrụ akọ na ike isi mmalite na n'ụwa nile. Nke a na ebe nke ọkachamara nka enye Hisurp na-eduga onu a na ubi nke azụmahịa.
Nke a kwụ zoro ezo ofufe eriri igwe usoro e mepụtara iji nweta kacha nkasi obi na kacha ike arụmọrụ ke mkpọtụ na o siri ike iji nweta na ot ikuku ọnụ nkeji (gbawara n'etiti, ofufe coils). Ya ịrụ ọrụ na-eme ka ọ dị mma ngwaahịa maka ọ bụla echichi na-achọ nlere echesinụ ụkpụrụ na mkpọtụ etoju. The nlezianya na-amụ a plenum ike suppressor na ojiji nke a akpan akpan egbochi ihe onwunwe (recycled polyester eriri) elu ụda na-adọrọ ike.
Magburu onwe anwụ ngwa ngwa pụrụ iche maka na mmiri ngwa
Light ibu imewe
Wide ọrụ nso
Ukwuu mgbanwe akụkụ obi sie iche iche ngwa
Easy njem na nwụnye ọrụ
Igwe anaghị agba nchara na-atanye pan na 25mm elu
- All mmiri n'agbanyeghị ọhụrụ ma ọ bụ ochie
- Nta nkeji ụlọ na engine ụlọ
Previous: nkịtị Type
Osote: Ft Dịwara
Marine Air conditioner Fan eriri igwe
Marine Fan eriri igwe
Marine Fan eriri igwe Unit
Marine packaged Fan eriri igwe Unit
Igwu Fan eriri igwe Unit
Ningbo HICON ụlọ ọrụ CO., LTD
Ekwentị: 0086 574 62132957